Charchit Online Khabar » मेयरज्यु रत्नपार्कमा निर्बाध खाना बाड्ने बाताबरण मिलाउनुपर्छ – सुर्य बज्रयाना
मेयरज्यु रत्नपार्कमा निर्बाध खाना बाड्ने बाताबरण मिलाउनुपर्छ – सुर्य बज्रयाना
प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०७७, बुधबार १९:३५
आजकाल फ़ेरि रत्नपार्क चर्चित भएको छ । चर्चित हुनुको कारण त्यहा चलेको आम सभा होइन । त्यहा निस्केको जुलुस होइन । त्यहा सुरु भएको मेसको कारण राष्ट्रको ध्यान त्यता तानिएको हो । जस्ले जे भने रत्नपार्कमा सुरु भएको यो पुनित कार्य धेरैका लागि उदाहरिय हो । धेरैको लागी यो कार्यले सकारात्मक छाप छोडेको छ ।
अहिलेको स्थिति भनेको कोरोना महामारीको हो । यो बखत ठुलो संख्यामा मानिसहरु बेरोजगार भएका छन । धेरै चुलाहरु बल्न सकेका छैनन् । नाम्ले भरिया र निर्माण मजदुरहरु सडकमा नै आइपुगेका छ्न । मध्यम बर्गको ठुलो हिस्सालाई अहिले सङकटले घरेको छ । हिन्दुशास्त्र अनुसार धेरै मानिसहरूलाई शनि लागेको छ । यो शनि महाङ्काल मन्दीरमा मंगलवार जल चढाएर निको हुँदैन न सङकटामा नरिबल चढाएर ठिक हुन्छ । यो शनि मन्छिन प्रत्येक साँझ बिहान पेटमा एक मुठी अन्न चढाउन पर्छ ।अन्न चढाउन रोजगार चाहिन्छ ।शहरमा रोजगारी नहुदा मानिसहरू पेटको शनि मन्छाउन कहाँ जाने ? धेरैजसोको विकल्प थियोे रत्नपार्क ।जहा उदार दिलका मान्छेहरु भेटिन्थे ।खाना बाडिरहेका ; भोकै नबस्नु भनिरहेका ।
केही समय अगाडि एउटा अपाङ्ग परिवारलाई सहयोग गर्ने सौभाग्य यो पङ्क्तिकारले पनि पाएको थियोे । जो तीन दिन देखि भोकै थिए । सडकमा माग्न पाएका थिएनन ।अन्य स्रोत गुमेको थियोे ।उनीहरू एक छाक भात खान पाउदा अन्त्यतै खुशी भएका थिए ।उनीहरू भन्थे – तपाईंले सानो सहयोग नगर्नु भएको भए ; हाम्रो त ज्यानै जान्थ्यो ।म बेलाबेलामा सोच्छु यो बिरानु शहरमा कती मान्छे होलान् ; जो एक छाक खाना पनि नपाएर छट्पटाइरहेका , आत्मालाई सरापिरहेका ।
ती सबै असाहयको आशाको केन्द्र थियोे – रत्नपार्क ।
काठमाडौं उपत्यकाका मेयरले दिएको निर्देशनका कारण हजारौं मान्छे बिचल्लीमा पर्ने भएका छ्न ।
मेयरले काठमाडौंलाई मगन्ते शहर हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेछ्न । यो यसको जिम्मेवार को ? काठमाडौंलाई भोको नराख्ने जिम्मा स्वयं मेयरज्युकै होला । काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउने जिम्मा पनि उहाँकै होला । काठमाडौंलाई भब्य बनाउने मुख्य जिम्मेवार मेयरज्यु नै हो ।
तर उहाँवाट आएको जुन निर्देशन छ , त्यो कदापि जनहितकारी छैन ।मेयरज्यु मान्छे भोकै भए भने शहरको शोभा बढछ हो ?के छ तपाईंको उत्तर ?